SEENAA GABAABDUU BADHAASOO (YAASSIIN) IJEE -
SEENAA GABAABDUU BADHAASOO (YAASSIIN) IJEE
bilisummaa October 20, 2018	1 Comment
Onkololeeysa 15, 2018
Abbaa Urjii tiin:
Arra, wal’aansoon dheertuu fii hadhooytuun qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa, karaa hin yaadiniin, diina jilbiiffachiiftee, yoomiyyuu daran, hegeree bilisummaa, bareedduu, sadoo fii qananaii, qaawaanillee tahu, lammii daawwachiisaa jirti. Gama biraa tiin, ammaas, arra, EPRDF, dhaabni baroota diiydamii torbaaf, lammii biyyaa ajjeesaa, araraasa, irreen aangorra ture, yaroo aangoo caalaa dheereeyfachuuf, hawwii cimtuun qophaawaa jira.
EPRDF filmaata bara 1992-af qophaawame, qubaan arkachaa akka hin dandeenye gaafa hubate, aangoo qaataan dhunfachuuf dhaabota hawaasa keessatti deeggarsa irra qaban dooyaa filmaataa (siyaasaa) irraa dhabamsiisuuf, karaa adda-addaa tiin, duula gara-garaa itti bane. Akeekni barruu tanaa, haallan san tarrisuu miti. Warroota haala akkasii tiin lubbuun wareegamte keeysaa seenaa Badhaasoo Ijee (Yaassin Haaji Ahmad) lammii gurra buusuu dha.
Badhaasoo, (Yaassin), Godinaa Baha Oromiyaa, Aanaa Baddannoo, magaala Baddannoo keessatti, Abbaa isaa Haaji Aammad Yaassiin, Qaadii Magaalichaa, tii fii aayyoo isaa Faaxumaa Wadaay Culullee-rraa, toora bara 1957 dhalatee, achumatti guddatee, qormaata barnoota hulaa saddeetii akka dabreen, itti fufuuf Dirree Dhawaa bu’e.
Isaa hulaa kudhan xumuree, tan kudha tokkoo keeysa jiru, fincilli mootummaa Hayle Silaasserratti godhamaa ture injifatee, bulchiinsi isaa kan Dargii tiin bakka bu’e. Haalli kuni, waan barnoota adda kuteef, Badhaaso odoo hin jaalanne qe’etti deebi’e. Yaroon Badhaaso qe’etti deebi’e, yaroo, Jaarraa Abbaa Gadaa hidhaa bara shanii, tan biyya Soomaliyaa keessaa bahee, naannoo sanitti wal’aansoo bilisummaa ummata Oromiyaa tiif qabsoo hidhannoo itti jalqabe ture. Akka oduun qabsoo bilisummaa gurra seenteen, Badhaaso, barnootatti deebi’uu maganfatee, miseensoota jibir qabsoo hidhannoo tiif murtanii sossoohaa jiranitti makamuuf, jalqaba bara 1977, achumaan, karaa Raammis qaceele.
Qabsoon hidhannoo Badhaaso faan itti dabalaman, yaroo gabaabduu keeysatti, irree hortee, nafxanyoota gaafa Minilikirraa naannoo san qubatanii biyyaa fii ummatarratti abbooman baareysitee, gandoota baadiyyaa keessaa gugachiifte. Nafxanyoonni baaraganii qe’eerraa baqachuu, hortee isaanii tii fii Dargii akkaan naasise. Kanarraa kan ka’e, qabsoo bilisummaa ganamaan qaxara cabsuu murteeyfachuun, ummata naannoo sanii araraasuurratti seenan. Yakka ummata humaa hin balleeysin irratti hojjachuuf karoorfatan kanaan namoota hedduu galaafatan.
Radi’eet Asfaaw, kan haaluma wal fakkaataa akkanaa tiif, ummata aanaa Oborraatti gocha naasuu dhablee gaggeeysaa ture, haala naannoo Baddannootti uumamerratti tarkaanfii fakkataa fudhachuuf, gamas sossoohe. Akka achi gayeen, odeeyfannoo arkateen, namoota galaafataaf irratti xiyyeeffate keessaa tan duraa haadha Badhaasoo taate. Isii “kan nagayaan nu bulchite, nagaayn nu oolchi,” jechaa, libaanata manatti aarfatee, taaziyaa ollatti galte dhaquuf manaa gadi baate, alatti, ilmaan malees xiqqaa fii guddaa duratti, xiyyitiin boqoo dhawee lafatti darbe. Gochi san Badhaaso daran qabsotti cimse. Haala sanirraa kan ka’e, gaafa qabsoon hidhannoo ganamaan rakkoo wal dhabbii keeysa seentee, duumeeysa dukkanaa tiin hagoogamte, Badhaaso, warra dhibdee ilkee ciniinnatanii irra aanuuf murteeyfatan keeysaa tokko tahe. Isaa murannoo saniin qabsotti jiru, bara 1982 keeysa, naannoo Habrootti, fedhiin alatti, harka diinaa seenuu mudate.
Araraafama mana hidhaa Dargii tan bara lamaa booda, gunaan keeysaa bahee, barnootaatti deebi’ee, qormaata hulaa kudha lamaa haala gaariin xumuree, Universitii Finfinneetti tarkaanfate. Lafa qe’ee fii firarraa fagootti, haalaa nafaqaan rakkisaa keessatti, barnoota isaatti cimee, bara afurii booda Injinerummaan eeybifamee, hoojum qormaata biyyee-rratti mindeeyfame.
Badhaaso’o ogummaa baratetti hujii arkatee, hegeree isaa tottolfachaa jiru, bulchiinsi mootummaa Dargii diigamee, tan Ceehumsaa dhaabbatte. Haala kanaaf, yaroo ABO magaalaa seenu miseensota buuleeyyi dhaabicha simatan irraa tokko tahe. Sanirraan, odoo hin turin, waajjira ABO Biyyoo Adaretti banatetti, gaggeeysummaa ramadamee, hujii isaa dhiisee, tan dhaabaatti bobbahe.
Toora dhuma bara 1991, EPRDF, hawaasa Oromiyaa keeysatti akka hegeree hin qabne hubate. Hubannoota kanarraa, irreen aangoo qabachuuf girgirii kaasuu karoorfate. Sagantaa shororkaa karoora isaa ittiin jalqabuuf, waajjiroota ABO cufuu, deeggartoota araraasuu fii miseensota ajjeesutti seene. Warra gocha shiftummaa tanaaf irratti xiyyeeffate keeysaa kan duraa Badhaasoo Ijee tahe. Badhaasoo dirqama dhaabni isaa irratti ramade qaamaa fii qalbiin fiixa baasaa jiru, warra EPRDF (Wayyaanee) keeysaa tokko, (kan ammaaf maqaa dhawuun hin barbaachifne) waajjira magaalaa Harar keeysaa qabanitti Badhaaso yaammatee, gaaffii takkaan malee, xiyyitii itti laakaawe.
EPRDF- yaroo haala saniin Badhaaso ajjeesu, dhaabni isa waajjira keeysa kaayate, tarkaanfii takkallee hin fudhanne. Akki san, EPRDF, ajjeechaa fakkataa akkasii bakka heddutti akka itti fufuuf xurree saaqe. San booda, hamma ABO haala deemaa jiruun aangoorratti bahuu akka hin dandayuu liqimsee, mootummaa Ceehumsaa keeysaa if baasutti, xurreen ajjeechaa fii galaafataa guyyuma-guyyaan bal’achaa deemte.
Arra yaroo EPRDF if haaroomse kanatti, seenaan bara 26-a duraa maaf kaafamuun barbaachisaan gaaffi namoota garii tahuun beekkamaa dha. Kanaaf deebisaa lamaa tu jira. Tan duraa, akka tilmaama umrii ummata biyya Oromiyaa kan arraatti, irra hedduun namaa, warra gaafa haalli kuni tahu, hin dhalatin ykn if hin barini. Kan lamadaa, akka seenaa EPRDF irraa hubatamutti, dhaabni kuni, (akka isaan himatanitti) ji’a Gurraandhalaa kan bara 1989, iddoo Shiree (Inda Sillaasee) ja’amtutti eega dhaabbaterraa kaasee, takkaa if haarayoomsuu irraa hara fudhatee ykn qulqullaawee hin beeku. Haala kanaaf, kaayoo isaa, Revolutionary Democracy (Dimokraasii Tarkaanfattuu ykn qoonqabii malee)-tiin ammaa-amma if gaamaaggamaa, shittoo ummanni fedhuun afaan lulluuqqachaa as gaye. Akka EPRDF-tti, ummanni isa malee ijaa fii gurra qabaachuu hin qabu. Takka-shanii isa galaafatte kan fide kana. Akka kaayicha isaatti, dimocraasii jechuun haala fedhee nuu innummaan aangoorra turuu dha.
Ee! arra, haalli kan bara 26-a duraa tiin akkaan wal dhaba. Ummanni niis bakka dur san hin jiru. Garuu, fedhiin EPRDF tan haala fedheenuu aangoorra turuu sanuma. Dhaabni eega uumamee kaasee sadoo fii qananiin adda hin bahin, haala kana keessa turuuf wixxifachuun ajaa’iba namatti hin tahu. Kan raajii tahuuf jiraatu, dhaabni baroota 27-n dabran heeraan alatti aangorra turuuf miidhaa hammana hin ja’amne lammiirraan gayaa ture, filmaata haqaa tiin injifatee as bahu. San malees, aangoo nagayaan gadi dhiisee arkuu dha.
Hundumaa fuu, shororkaa si’ana biyya keeysa deemaa jirturratti irkachuun, ilmaan Oromoo kanneen “siyaasaan biyyattii kan durii miti,” ja’anii dhaaba fedhan jalatti hiriiruu isaanii ifa godhanii fii, EPRDF waliin dorgommii filmaataa seenuu barbaadaniif, seenaa Badhaasoo Ijee fii tan gaafasii yaadachiisuun barbaachisaa dha.
Hub: Seenaan armaa olii, kitaaba kiyya kan Raamissi-rraa HUURSO ja’u keeysaa tan dubbuuyfamte.
Previous Adeemsa Paartii Dimokraatawa Oromoo (PDO) keessa iccitii maaltu jira?
Next AJJEECHAAN UUMMATA OROMOO YOOM DHAABBATA?
Part 1 Odaa Hora Most of the accomplishments of human activities in daily life, ideas: …
Rabbiin janaatan ha qananisu.